Ma heli karaa dariiqa lagu hagaajin karo hal dhibcood oo muhiim ah ee bogga internetka?
Qaybta ugu muhiimsan ee dallacaadda dallacaadda search engine waa in la helo darajo muhiim ah ee boggaaga. Darajada keyword waa marka website-kaagu ku jiro Google ee ku habboon tixraaca raadinta suuqa. Waxay saameyn weyn ku leedahay gaadiidkaaga iyo dib-u-celinta kadib. Sida tirakoobka muujineyso in ka badan 70% isticmaalayaasha mashiinka raadinta guji bogagga internetka kuwaas oo lagu meeleeyo bogga ugu horeeya SERP. Waxay ka dhigan tahay in aad sare u kacday, aad uga fiican tahay inaad tahay. Labada qaybood ee la bixiyo ee la bixiyo iyo kuwa loo yaqaan "organic search", waxaa la heli karaa darajo muhiim ah oo la fahmi karo iyada oo la adeegsanayo qalab cilmi-baaris oo muhiim ah iyo farsamooyinka naqshadaynta raadinta ee kala duwan - mobile prices lebanon. Nasiib darro, SEO ma had iyo jeer ina siiso natiijooyinka aan rajeyneyno.
. Makiinadaha raadinta ayaa laga yaabaa inay kuqoraan boggaaga kelmad gaar ah oo ka duwan kuwa aan jeclaan lahayn PageRank gaar ah. Sidaa daraadeed, aan ka wada hadalno waxa aad sameyn karto kiiskan iyo sida aad u hagaajin kartid liiska bogga ee ereyada muhiimka ah ee aad rabto.
Waa maxay qaababka aan u baahanahay si aan u helo hagaajinta darajooyinka keyword ee boggeyga?
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso waa nooca calaamadaha Google laga helo goobtaada. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in Google uu helo calaamadaha saxda ah ee kuu keeni kara gaadiidka. Waxaa jira khad khafiif ah oo udhaxeeya tayada tayada iyo ka-soo-saarka badan oo leh hirgelinta farsamooyinka naqshadaynta madow. Dib-u-soo-ceshin ayaa sababi karta ganaaxyada Google iyo hoos u dhigida booskaaga boggaaga.
Sidaa darteed, si aad u hagaajiso boggaaga bogga leh ee ku haboon xili aad raadineyso suuq-geynta suuqa iyada oo aan wax khalad ah oo ka-fududeyn, waxaad u baahan tahay inaad raacdo talaabooyinkan.
Darajada aasaasiga ah ee muhiimka ah
Heerka ugu horeeya ee heerarkaaga darajo hagaajinta, hubi halka boggagaagu ku jiro wakhtigan xaadirka ereyada raadinta waxay ubaahan tahay bartilmaameed. Qeybtan hoose waxay ku siin doontaa fursad aad ku cabbirto horumarka heerka sare ee mustaqbalka. Si loo fududeeyo hannaankan, waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah aaladaha liiska xirfadleyda sida Nidaamka AutoContent Auto ama Qorshaha Keydka Google. Iyadoo gacan ka heleysa qalabkan, waxaad si gooni ah u hubin kartaa qiimeyntaada maalin kasta.
Si aad u hesho kala duwanaantaada ereygaaga, ku dheji muggaaga sare iyo raadinta raadinta la bartilmaameedsanayo ee Qorshaha Gundhigga Google Qalabka SEO. Labada qalabba waxay ku siin doonaan isbeddelada ku haboon ee leyliska muhiimka ah ee lagu soo xulay waxayna ku siinayaan falanqeyn tartan oo mid kasta oo ka mid ah ereyada muhiimka ah. Waxaan ku siin doonaa fikrad qurux badan oo ku saabsan tartanka tartanka iyo qiimaha muhiimka ah. Tallaabada xigta, waxaad ubaahan tahay inaad gashid ereyga muhiimka ah ee aad ku raadinayso sanduuqa raadinta Google si aad u hesho soo jeedinta ay soo jeediyeen Google ee ereyada muhiimka ah ee muddada dheer. Waxaa intaa dheer, waxaad ubaahan tahay inaad eegto meelaha ay ka muuqdaan bogga ugu horeeya ee SERP iyo wixii talo ah ee ku saabsan "shuruudaha raadinta ee la xidhiidha" ee aad haysato.
. Tusaale ahaan, haddii erayga muhiimka ah ee aad jeclaan lahayd inaad bartilmaameed u tahay tartan waa inaad dib u eegtaa maadaama ay jirto fursad yar oo aad awoodi kartid inaad ku garaacdo tartanka suuqa kala iibsiga oo aad u badan.
Si aad u xaqiijiso ama u cusbooneysiiso filashooyinkaaga, u fiirso natiijooyinka TOP10 ee ku saabsan bogga ugu horeeya ee SERP. Waxaad ubaahan tahay in aad hubiso in arimahaani ay yihiin kuwo rasmi ah iyo inta ay jirayaan.